The Mandalay Daily News (11.4.2020)
The Mandalay Daily News (10.4.2020)
2,787 ကြည့်ရှုသူပေါင်း,6ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း
The Mandalay Daily News (5.4.2020)
5,752 ကြည့်ရှုသူပေါင်း, 12 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း
မန္တလေးမြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စာရင်းအရ လူဦးရေ ၁ ၂၂၅ ၅၅၃ ယောက် ရှိသည်။ စီးပွားရေးမြို့တော် ရန်ကုန်မြို့ မှ ၃၈၅မိုင် ကွာဝေး၍ ဧရာဝတီမြစ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ကုန်းဘောင်မင်းဆက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံးမင်းနေပြည်တော် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးခရိုင်တို့၏ ရုံးစိုက်မြို့ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ပြီးနောက် ဒုတိယအကြီးဆုံးသောမြို့ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် တည်ရှိသကဲ့သို့ပင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတို့ စုဝေးရာ ဒေသလည်း ဖြစ်ပေသည်။ မန္တလေးမြို့သည် ခေတ် ၃ ခေတ်ပြောင်းခဲ့သော်လည်း ထင်ရှားလျက်ပင် ရှိပေသေးသည်။ နှစ် ၁ဝဝ အတောအတွင်းဝယ် မန္တလေးမြို့တွင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဒဏ်၊ မီးဘေးအန္တရာယ်များကို ခံရသောကြောင့် အပျက်အစီးရှိခဲ့သော်လည်း အသစ် ပြန်လည်ပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့သည်။…
10,926 ကြည့်ရှုသူပေါင်း, 12 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ အရှေ့ဖက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ အနောက်ဖက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ဖက်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ် နှင့် မြောက်ဖက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တို့က အသီးသီးဝန်းရံလျက်ရှိသည်။ တိုင်းဒေသကြီး၏ မြို့တော်ဖြစ်သော မန္တလေးမြို့၌ မြန်မာတို့၏ နောက်ဆုံးမင်းများ စိုးစံခဲ့သော မြနန်းစံကျော် ရွှေနန်းတော်တည်ရှိသည်။ ပထမမြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သော ပုဂံမြို့ဟောင်းမှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်း၌ တည်ရှိပြီး လက်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့များ ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှ ပတ်ပတ်လည် ဝန်းရံထားသည်။ မာတိကာ ၁ သမိုင်းကြောင်း ၂ တည်နေရာနှင့် အကျယ်အဝန်း ၃ ရာသီဥတု ၄ အုပ်ချုပ်ရေး ၄.၁ မြို့တော် ၄.၂ အုပ်ချုပ်ရေး ၄.၃ ဥပဒေပြုရေး ၄.၄ ခရိုင်၊…
24,921 ကြည့်ရှုသူပေါင်း, 74 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း
The Mandalay City Development Committee (Burmese: မန္တလေးမြို့ စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ; abbreviated MCDC) is the administrative body of Mandalay, the second largest city in Myanmar (Burma). MCDC has wide-ranging responsibilities, including city planning, land administration, tax collection, and urban development. MCDC raises its own revenues through tax collection, fees, licenses and property development. MCDC’s chairman acts as…
48,811 ကြည့်ရှုသူပေါင်း,6ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း
3,444 ကြည့်ရှုသူပေါင်း, 17 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း
3,446 ကြည့်ရှုသူပေါင်း, 19 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း